မေးခွန်း Convair 580 FSX
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ #993 by sruble
ငါမကြာသေးမီက convair download လုပ်ထားသော 580 fsx။ ငါ့အတွက်ပြproblemနာက vc (သို့) 2d panel လုံးဝမရှိဘူး။ မဆိုအကူအညီကိုအလွန်တန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ - လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ #994 by DRCW
မင်္ဂလာပါအဘယ်အရာကိုဗားရှင်း FSX သငျသညျအပြေးနေကြသနည်း ဘောငျသို့မဟုတ်ရေနွေးငွေ့? သငျသညျ DX10 preview ကိုအတွက် run နေပါသလား? သငျသညျတခုဘောငျဗားရှင်း running နေတယ်ဆိုရင် FSXဒါ Deluxe လား သို့ဆိုလျှင်သင်သည် SP1 နှင့် SP2 ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီလား။
ငါကိုသုံးပါ FSX အရှိန်နှင့်အတူကြွလာတော်မူသောဘောငျကိုရွှေထုတ်ဝေ, (SP1 & SP2) ။ ငါမပြဿနာနှင့်အတူဤလေယာဉ်တစ်စင်းကိုဒေါင်းလုဒ်။ ကျွန်မအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့ VC ကိုရှိသည်။ ဒီ model မ 2D လေယာဉ်ကုန်းပတ်ရှိပါသည်။ ဖန်တီးသူအတွင်းရှိအခြား default အနေနဲ့လေယာဉ်တင်အနေဖြင့်မျှဝေ gauge ကိုသုံး FSX.. သင့်အနေဖြင့်ခေါင်းစဉ် (SP2 အတွက်မှတ်သားပါလိမ့်မယ် FSX ) SP1 နှင့် installed SP2 မရှိရင်, ဒီလေယာဉ်ပျံလုပ်ငန်းလည်ပတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အထက်ပါ flyawaysimulation အထုပ်ကို Download လုပ်, သင်တစ်ဦးအလုပ်လုပ်နေလေယာဉ်ပျံများသင့်ပါတယ်။ မှုအတွက်ဂုဏ်ပြုကြပါစို့
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:2နှစ်ပေါင်း 1 တစ်လအကြာအားဖြင့် DRCW.
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ #1004 by sruble
ငါ Steam ကို run နေတယ်၊ ​​အဲဒါကို uninstall လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် vc မှာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ #1005 by DRCW
သငျသညျပြတင်းပေါက် 10 running နေတယ်ဆိုရင်ဒါဟာနှင့်အတူအားလုံးသိကြကိစ္စများများအတွက်အင်တာနက်စစ်ဆေး .. အလုပ်လုပ်စကားကိုနားထောငျဖို့အတှကျဝမျးသာ FSX။ မင်္ဂလာ Land